Chameleon Run သည်ယခုအခါ Play Store တွင်အခမဲ့ဖြစ်သည် Androidsis
ရှုပ်ထွေးမှုများစွာနှင့်အတူ Galaxy S8 သည်ထိုနေရာတွင်ရှိပါကတောင်ကိုရီးယား၏အထင်ကရသစ်တစ်ခုထက် ကျော်လွန်၍ ကမ္ဘာကြီးနှင့်ဘဝရှိသည်ကိုအထူးသဖြင့်ဂူးဂဲလ်ပလေးစတိုး၌ကျွန်ုပ်တို့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အံ့သြဖွယ်ရာဖြစ်ခဲ့ရသည်ကိုမေ့လျော့နေကြသည်။ ယခုသင်လုံးဝအခမဲ့ရရှိနိုင်သည့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ငွေပေးချေသောဂိမ်းတစ်ခု
အတွက်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်ဂိမ်း ပုတ်သင်ညို Run ကို, un စိတ်ဝင်စားဖို့, မူရင်းနှင့်စွဲလမ်းဂိမ်း ပုံမှန်အားဖြင့် ၂.၃၉ ယူရိုရှိတယ်။ အခုဆိုရင်သင့်အနေနဲ့ Android ဖုန်းကိုယူရိုငွေတစ်ချပ်မပေးဘဲ Android ဖုန်းမှာသုံးနိုင်ပါပြီ။
အကယ်၍ သင်ကဂိမ်းအသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုလျှင်၊ အားယူပြီး Chameleon Run ကိုရယူပါ
သင်၏ Android စမတ်ဖုန်းမှပျော်စရာကောင်းသောပျော်စရာအချိန်များအတွက်ဂိမ်းအသစ်တစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေနေပါက Androisis တွင်ကျွန်ုပ်တို့ယခုတွေ့ရှိပြီး ဖြစ်၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောဂိမ်းကိုသင်ပြောခဲ့သောကြောင့်ယခုသင်ရှာဖွေခြင်းကိုစွန့်လွှတ်နိုင်သည် ပုတ်သင်ညို Run ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ယူရို ၂.၃၉ ဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားပြီးယခုအခါအခမဲ့ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ပုတ်သင်ညို Run ကို ဂိမ်းထုတ်လုပ်သူ Hyperbolic Magnetism နှင့် Alto ၏စွန့်စားမှုထုတ်ဝေသူ Noodlecake ဂိမ်းများမှလူကြိုက်များပြီးလေးစားဖွယ်ကောင်းသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပုတ်သင်ညို Run ကို အဲဒါပဲ "ဂိမ်းပြိုင်ကား ရောင်စုံလှည့်ကွက်နှင့်အတူထူးခြားမြန်ဆန်စိန်ခေါ်မှု။ ခုန်။ အရောင်များနှင့်အပြိုင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုကျွမ်းကျင်စွာပြုလုပ်ထားသောအဆင့်များမှတဆင့်သင်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားနိုင်သည်။
ကစားသမားတစ် ဦး အနေနှင့်သင်၏အဓိကတာဝန်မှာမြေပြင်အရောင်နှင့်ကိုက်ညီစေရန်တစ်ပြိုင်နက်တည်းသင်အပြေးမရပ်နိုင်သည့်အပြင်ပလက်ဖောင်းများအကြားခုန်ကူးရန်အရောင်ပြောင်းရန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုသင်အဆင့်ဆင့်ဖြည့်စွက်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုးလေးထင်ရသလောက်တော့ဒါဟာတကယ့်ကိုရှုပ်ထွေးတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုပါ။ ထို့အပြင်အဆင့်တစ်ခုစီသည်ယခင်အဆင့်ထက် ပို၍ ရှုပ်ထွေးလာသည်။
သင်၏ပန်းတိုင်သည်သင်ပြေးသောအခါမြေပြင်အရောင်နှင့်ကိုက်ညီရန်အရောင်ပြောင်း။ ပလက်ဖောင်းမှပလက်ဖောင်းသို့ကူးပြောင်းရန်ဖြစ်သည်။ လက်ျာဘက်လွယ်ကူစွာအသံ? ကောင်းပြီ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမယုံပါနဲ့!
ဒီဂိမ်းကအရမ်းကိုမြန်ဆန်ပြီးအလွန်ခက်ခဲတဲ့ကြားက ၎င်း၏စက်ပိုင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ခလုတ်နှစ်ခုကိုသာအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပြီးတစ်ခုမှာခုန်ရန်နှင့်နောက်တစ်ခုကိုအရောင်ပြောင်းရန်ဖြစ်သည်.
၎င်းသည်ကွဲပြားသောခုန်ခြင်းများကိုနှစ်ကြိမ်ခေါက်ခြင်း၊ ခေါင်းခုန်ခြင်းနှင့် linear မဟုတ်သောအဆင့်များတို့ကိုပေးထားသည်။ တစ်ခုစီတွင်သင်ပြီးမြောက်ရမည့်အထူးရည်မှန်းချက်သုံးမျိုးရှိသည်။
အဆိုပါအကြား ၏အဓိကလက္ခဏာများ ပုတ်သင်ညို Run ကို ဂိမ်း၏ကိုယ်ပိုင်တည်ဆောက်သူသည်အောက်ပါတို့ကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။
"ဘယ်နေရာမှာမှခုန်" နှင့် "ဦး ခေါင်းခုန်" နှင့်အတူဆန်းသစ်သောခုန်မက္ကင်းနစ်။
တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးခုရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အတူ Non-linear အဆင့်ဆင့်။
ကျနော်တို့ကအပြင်းအထန်တောင်းဆို Chameleon Run သည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည့်ကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်မြေအောက်ရထားဖြင့်ခရီးသွားစဉ်၊ ပန်းခြံအတွင်းရှိအပြင်ပန်း၌ပျော်မွေ့နေစဉ် (သို့) ရေချိုးခန်းသို့လည်ပတ်နေသူများကိုသတ်ဖြတ်ခြင်းတွင်ဂိမ်းအသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေသူများအဖို့၊ ပုတ်သင်ညို Run ကို ၎င်းသည်ဂူးဂဲလ်ပလေးစတိုးတွင်ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ယခုသင်အား၎င်းကိုအခမဲ့အခမဲ့ယူနိုင်သည်။
NOTA: Chameleon Run သည် ၂.၃၉ ယူရို Android ဖုန်းများအတွက် Google Play Store တွင်ပုံမှန်စျေးနှုန်းရှိသည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်၎င်းကိုအပြည့်အ ၀ အခမဲ့ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သို့သော် ကန့်သတ်အချိန်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုရရှိရန်အလွန်လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဘယ်အချိန်မှာမြှင့်တင်ရေး၏ Androids မဟုတ်သလိုငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရမ ပုတ်သင်ညို Run ကို ယင်း၏ developer ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်ပေးမထားပါဘူးအဖြစ်။ ကျွန်ုပ်တို့အာမခံနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာဤစာမူကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည့်အချိန်တွင်ကမ်းလှမ်းချက်သည်တရားဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်စာဖတ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးသင်၏ကမ်းလှမ်းချက်အတွက်ပြေးပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Play Store တွင်ယခုအခမဲ့ကစားနိုင်သည့် Chameleon Run ဖြစ်သည်
Samsung Galaxy S8 ၏နောက်ခံပုံများကို Download လုပ်ပါ